नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा
विराटनगर । नेपाल साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाईनलमा प्रवेश गरेको छ । समुह चरणको दोस्रो खेलमा बंगलादेशले भुटानलाई पराजित गरेसंगै नेपाल एक खेल अगावै प्रतियोगिताको अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको हो ।
समुह एबाट बंगलादेश पनि सेमिफाईनल प्रवेश गरेको छ ।
भुटान प्रतियोगिताको समुह चरणबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ । साफको पाँचौ संस्करणसम्म आईपुग्दा भुटान प्रतियोगितामा जित विहिन छ । उसले साफमा अहिलेसम्म एक जित समेत दर्ता गर्न सकेको छैन ।
बिहीबार विराटनगरको सहिद रंगशालामा बंगलादेशले भुटानलाई २–० ले पराजित गर्यो । बंगलादेशको जितमा मिश्रात जहान मौसमी र सविना खातुनले गोल गरे । दुवै गोल दोस्रो हाफमा सम्भव भएको थियो ।
४७ औ मिनेटमा मोनिका चक्माको कर्नर प्रहारलाई भुटानी डिफेन्डरले क्लियर गर्न नसकेपछि मौसमीले बंगलादेशलाई अग्रता दिलाएकी थिईन् । ८५ औ मिनेटमा भुटानको डिफेन्स लाईनलाई एक्लै विट गर्दै कप्तान सविनाले दोस्रो गोल गरेकी थिईन् ।
समुह विजेता टोलीको टुङ्गो शनिबार हुने नेपाल र बंगलादेशबीचको खेलले तय गर्नेछ ।